पर्यटन आगमन : कहिल्यै भेटिँदैन सरकारी लक्ष्य, सफल होला ‘भिजिट नेपाल २०२०’ ?
काठमाडौं –सरकारले आगामी वर्ष सन २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत् उक्त घोषणा गर्दै सरकारले सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा समेत आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यसअघिका तथ्यांक अनुसार सरकारले राखेको पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य भने कहिल्यै पूरा भएको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, मन्त्रालयका अनुसार सो लक्ष्य पूरा भएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालमा पनि १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ९ लाख ४० हजार पर्यटकको आगमन भएको थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा ८ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेकोमा ७ लाख ५३ हजार २ पर्यटकको आगमन भएको थियो ।
यसअघिका वर्षहरूमा सरकारी लक्ष्य अनुसार पर्यटक नआउनुले आगामी वर्ष सन २०२० मा पनि सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने अनुमान गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पर्यटकले गर्ने खर्च घट्यो
गत आर्थिक वर्षमा पर्यटकले गर्ने खर्च पनि घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा प्रतिदिन प्रति पर्यटक खर्च ५३ डलर रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रतिपर्यटक ४४ डलर मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रतिपर्यटक ६० डलर खर्च गराउने लक्ष्य राखेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा प्रतिपर्यटक ५४ अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । सो आवमा सरकारी आपेक्षा भने ५८ डलर प्रतिपर्यटक खर्च हुने रहेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले पर्यटकले गर्ने खर्चमा किन कमी आएको भन्ने कुरा सरकारले खोजिरहेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान गुणस्तरीय पर्यटक नआउनु र इपेन्टका कारण कम खर्च भएको बताउँदै वास्तविक कारण खोजी गर्ने काम भइरहेको बताए ।
‘त्यो किन भयो ? कारण हामीले पनि खोजिरहेका छौं’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘गुणस्तरीय पर्यटक नआउनु र इपेमेन्ट कारण कम खर्च देखिएको हाम्रो अनुमान हो । राष्ट्र बैंकले पनि इपेमेन्टका कारण पर्यटकले गर्ने खर्चमा समस्या आएको औंल्याएको छ । त्यसलाई पनि हामी आवश्यक सुधार गर्छौं ।’
लक्ष्य अनुसार पर्यटक नआउँदा र आएका पर्यटकले पनि आपेक्षा अनुसार खर्च नगर्दा मुलुकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ ।
फलस्वरूप सरकारी लक्ष्य अनुसार विदेशी रकम आर्जन हुन सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पर्यटकले गर्ने खर्चबापत मात्रै १ अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर रकम बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
६७ करोड ९ लाख अमेरिकी डलर मात्रै आर्जन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा ८० करोड अमेरिकी डलर आर्जन हुने सरकारी लक्ष्य रहेको र सो आर्थिक वर्षमा ६२ करोड अमेरिकी डलर आर्जन भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विदेशी पर्यटकले नेपालमा औसत १२ दिन ४ घण्टा बस्ने गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रतिपर्यटक १२ दिन ६ घण्टा र २०७३/०७४ मा १३ दिन ४ घण्टा बस्ने गरेका थिए ।
मूल्यवृद्धिकाे उकालाे यात्रा, काठमाडौँमा सबैभन्दा उ...